Qodobo laga soo saaray kulankii Muuse Biixi iyo Uhuru Kenyatta ay ku yeesheen Nairobi… – Hagaag.com
Qodobo laga soo saaray kulankii Muuse Biixi iyo Uhuru Kenyatta ay ku yeesheen Nairobi…
Posted on 15 Diseembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Kulan ay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay ku yeesheen labada madaxweyne Somaliland iyo Kenya, Muuse Biixi Cabdi iyo Uhuru Kenyatta, ayey ugu danbeyntii ka soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ku heshiiyeen labada dhinac.
Labada madaxweyne waxay xuseen, ayaga oo aad ugu qanacsan, in iskaashiga ka dhexeeya Kenya iyo Somaliland uu salka ku hayo mabaadi’ iyo qayim ay wadaagaan oo ujeedkoodu yahay kobcinta nabad waarta, xasillooni, koritaan joogto ah, iyo barwaaqo wadaag ah. Ayada oo ay khuseyso arrintan, waxay ballanqaadeen inay xoojiyaan, oo ay sii dheereeyaan iskaashiga u dhexeeya Kenya iyo Somaliland.”
Ayada oo ay khuseyso arrintan, labada hoggaamiye waxay isla qireen in Somaliland ay sanado badan aheyd nabad iyo xasillooni, taasi oo ku timid sida ay uga go’an tahay mabaadi’ida dimoqraadiga ah iyo aasaasidda hay’ado dowladeed oo adag. Kenya iyo Somaliland waxay sii wadi doonaan inay si wadajir ah uga shaqeeyaan horumarinta nabadda iyo xasilloonida, iyo raadinta barwaaqo wadaag ah,” ayaa lagu yiri qoraalka.